Ifaskoti Uhlobo Shot imbabala Machine - China Qingdao Effect Machine
i technical iparameters ngolu hlobo lulandelayo:
Olu thotho isetyenziselwa ukucoca umphezulu, irusi romoving, kunye ukugxininiswa umphezulu uhlobo ngalunye oluphakathi kunye ezingenkulwanga eyahlulayo,
yacaca kunye umsebenzi. Kufanelekile ukuba isikali imveliso diffenent, unokuba ukuma ukusetyenziswa yedwa kunye unitscan ezininzi nazo zingasetyenziswa ngokusebenzisana
kunye namacandelo yokuthutha eqhubekayo, wabhala ukuveliswa imigca ezihlambulukileyo-up.
Q32 uhlobo series umatshini ibhanti ladubula Umatshini imbabala na iingenelo yoyilo phambili, isakhiwo efanelekileyo amandla amancinci
ngesifo kunye kahle eliphezulu.
Ipharamitha Unit Q326 Q3210 QR3210
Imveliso T / H 0.6-1.2 3-5 1.5-2.5
Ilayisha Weight ikg 200 600 600
of One Piece ikg 10 30 30
Dia: ngokweemitha isondo mm Dia: 650 Dia: 1000 Dia: 1000
Umthamo efumanekayo m³ 0,15 0.4 0.3
Pill benze Volume kg / min 100 250 250
Power ukusasaza kW 12.6 32,6 24.3
Ubukhulu ulwandlalo mm 3681 * 1650 * 5800 3644 * 2926 * 5856 3972 * 2600 * 4768
Machine Total Weight ikg 2340 5843 7400
Lo matshini ladubula imbabala ungenziwa ngemfuneko ngokungqinelana neemfuno ezahlukeneyo.
Ukuze ukuthenga umatshini ifanelekileyo ngenxa workpieces yakho, nceda ubonise iinkcukacha ilandelayo.
1. Yintoni uhlobo workpiece ezihlambulukileyo?
2. Ubungakanani workpiece, ubude, ububanzi, ubude kunye nobunzima workpiece ubuninzi.
3. Yintoni umthamo wakho zemveliso nganye (iiyure 8) ngosuku?
4. nto Kuluvuyo kum ukuba unako unganikeza iifoto iinkcukacha workpiece kuthi.
Ngokusekelwe kwezi iinkcukacha zolwazi, izindululo eneenkcukacha zobugcisa ziya kuthunyelwa kuwe ngereferensi.
Next: Uhlobo edlala Shot ukuqhumisa Machine
Ngerabha Belt Shot Machine kwakho imbabala
Ziyehla Shot Machine kwakho imbabala
Uhlobo kwendawo Catenary Continuous Shot imbabala M ...